Neymar Jr oo fariin xun ka helay kooxda Barcelona – Gool FM
(Spain) 23 Luulyo 2019. Saraakiisha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxay muujiyeen go’aankooda kaga aadan dib ugu soo laabashada xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr garoonka Camp Nou.
Wargeyska “Le Parisien” ee dalka France oo xiganaya kan dalka Spain ee “Mundo Deportivo” ayaa wuxuu xaqiijiyay in madaxweyne ku xigeynka Barcelona ee Jordi Cardoner uu sheegay in maamulka kooxda aanu wali ka shaqeynaynin in Neymar uu dib ugu soo laabto garoonka Camp Nou.
Madaxweyne ku xigeynka kooxda Barcelona ee Jordi Cardoner ayaa wuxuu yiri:
“Faylka Neymar tixgalin lama siin markii horeba. Madaxweynaha kooxda ayaa xaqiijiyay isla fariintan”.
“Xaqiiqdii waxaa hada jira wada tashi deg-deg ah ee ku saabsan arrinta Neymar, laakiin waxay u muuqataa inay jirto in xoogaa aysan qanacsaneyn dhinaca kale ee kooxda Paris”.
Madaxweyne ku xigeynka kooxda Barcelona ee Jordi Cardoner oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri:
“Go’aan kama gaarin qiimaha Neymar Jr, ama lacagta looga baahan yahay heshiiskan”.
Waxaa jira warbixino dhowr ah ee xaqiijiyay in kooxda Barcelona ay xiiseeneyso in markale ay dib u soo ceshato Neymar iyadoo aanan kaga bixin wax qarashaad ah, kaliya waxay doonayaan inay sameeyaan heshiis is dhaafsi ee dhanka ciyaartoyda ah, iyagoo qorsheenaya in xiddigo ay ka mid yihiin Coutinho, Dembélé, Rakitić, Semedo iyo Umtiti ay qeyb kaga dhigaan heshiiskan.